လှသော ရှမ်းပြည် - မင်းယုဝေ
ရှမ်းရိုးမဗုဒ္ဓအွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်မှာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေသာမကနိုင်ငံရေး၊ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ရှမ်းလူမျိုးတို့၏စာပေ ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းစတဲ့ စာအုပ် စာတမ်းများကိုပါ အများ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင် ပြန်စာစီစာရိုက်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး အသစ်သစ်သော စာပေစာအုပ် များကို လွှင့်တင်သွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါ သည်။ အကြံပြုထင်မြင်ချက် ပေးလိုပါက shanyoma1@gmail.com သို့ ထင်မြင်ချက်များ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဂဒူးဂနန်းလူမျိုးဆန်း - ဥက္ကလာသောင်း
၁၉၇၁-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် စန္ဒါရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင်ပါသော ဆောင်းပါးကို ပြန်၍စာစီရိုက်ထားပါသည်။ File size(33.1)KB pdf file application. Uploaded by 26.5.2013.
သုဝဏ္ဏဘူမိကို တူးဖော်ခြင်း - စိုးရာဇာ
၁၉၇၇-ခုနှစ်၊ မေလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိသည့်ဆောင်းပါးကို ပြန်၍စာစီရိုက်ထားပါသည်။ File size (42.1)KB pdf file application. Uploaded by 26.5.2013.
၁၉၇၄-ခု၊ စက်တင်ဘာလ၊ စန္ဒါရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း။
မိုင်းတိုင်းဆီသို့ - ထီးချိုင့်နတ်စိုး
ထီးချိုင့်နတ်စိုးဟူသည် တည်တောဆရာတော်ကြီး၏ကလောင်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးမှ ရှမ်းအကြောင်းရေးသားခြင်းမှာ ရှားပါးသောစာမူတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးကို ၁၉၇၄-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထုတ် စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းမှ ပြန်လည်၍စာစီရိုက်ထားပါ သည်။ File size (161)KB pdf file application. Uploaded by 25.5.2013.
အရှေ့မြောက်တိုင်းတစ်ခွင် - သိန်းဖေမြင့်
ဤစာအုပ်သည် သိန်းဖေမြင့်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသားထွန်းဝေ၊ မြန်မာစာကထိကဖိုးကျော့မြိုင် စသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့သို့ ၁၉၇၂-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် စာဆိုတော်ဟောပြော ပွဲလာရောက်ပြီးနောက် သိန္နိမြို့၊ ကွန်လုံအစရှိသော မြို့များသို့ ဆက်လက်ခရီးထွက် ခဲ့ရာ မိမိတို့၏ခရီးသွားအတွေ့အကြုံများကို ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်နှင့်အလား တူ မြသန်းတင့်ရေးသားသော လွမ်းမောဖွယ် ကမောဇ(သို့)ရွှေလီရုပ်ပုံလွှာ ဆိုသောစာအုပ်နှင့် ဆင်တူပါသည်။ သို့သော် မြသန်းတင့် ရေးသားသောစာအုပ်မှာ ပို၍ ဖတ်လို့ကောင်းပြီး ဗဟုသုတပို၍ စုံလင်ပါသည်။ File size (3.18)MB pdf file application. Uploaded by 24.5.2013.
ရှမ်းလူမျိုးနှင့်ကိန္နရာယဉ်ကျေးမှု - စိတြ
စိတြရေးသားသော ကိန္နရာ ကိန္နရီစာအုပ်မှ ရှမ်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောအခန်းကို ထုတ်နုတ်၍ စာစီရိုက်ထားပါသည်။ File size (88.5)KB pdf file application. Uploaded by 22.5.2013.
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး နန်းကြာညိုကြော့ သမိုင်းနောက်ခံဖြင့် ပြောရသော် - စလင်းကျော်စွာ
၁၉၈၁-ခုနှစ်၊ ဇန်န​ဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေသော ဂီတပဒေသာမဂ္ဂဇင်းတွင်ပါသော မြဝတီမင်းကြီးဦးစမှ ခရစ်ယာန်ဓမ္မတေးသွားကို အတုလိုက် ၍ စပ်ဆိုထားသော သီချင်းကြီးပတ်ပျိုးကို နှောင်းကာလ၌ ဂီတမိခင်ကြီးအလင်္ကာကျော်စွာ ဒေါ်စောမြဧကြည်မှ ပြန်လည်ပြီး ဆန်းသစ် ဖန်တီးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဂီတလောကတွင် နာမည်ကြီးကျော်ကြားလာခဲ့သော သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းရင်းကို သမိုင်း နောက်ခံနှင့်ရှင်းလင်းထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ File size (31.9)KB pdf file application. Uploaded by 18.5.2013.
မြန်မာ့မြို့ရွာအမည်များ - လှသမိန်တင်ပြသည်။
၁၉၇၀-ခုနှစ်၊ မေလထုတ် စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင်ပါရှိသော ဆောင်းပါးကို ပြန်၍စာစီရိုက်ထားပါသည်။ File size (37.8)KB pdf file application. Uploaded by 18.5.2013.
ရှဝါနန် ခကျီးနှင့်ဂျိန်းဖေါ့ - နိုင်သူ(ကချင်)
၁၉၆၈-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင်ပါရှိသော ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်၍စာစီရိုက်ထားပါသည်။ File size (27.7)KB pdf file application. Uploaded by 18.5.2013.
A Century of Progress in Burmese History and Archaeology - G.H. Luce
File size (1.06)MB pdf file application. Uploaded by 17.5.2013.
ပါတော်မူနိဒါန်းနှင့်နိဂုံး - မြင့်ဆွေ
မြဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၉-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ်တွင်ပါသော ဆောင်းပါးကို ပြန်၍စာစီရိုက်ထားပါသည်။ File size (37.5)KB pdf file application. Uploaded by 17.5.2013.
A sketch of the labors sufferings and death of the rev.adoniram judson - A. D. GILLETTE, A.M.
PUBLISHED BY DANIELS & SMITH, 1851. File size (3.87)MB pdf file application. Uploaded by 16.5.2013.
A comparative study of lexical items of the northern thai dialects
This thesis paper was written with Thai Language. File size (3.57)MB pdf file application. Uploaded by 16.5.2013.
ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကို စွန့်ပယ်နိုင်ရမည် - မောင်ချစ်လှိုင်
မြဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၉-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ်တွင် ပါရှိသောဆောင်းပါးကို ပြန်၍စာစီရိုက်ထားပါသည်။ File size (27.3)KB pdf file application. Uploaded by 16.5.2013.
မိဖုရားခေါင်ကြီးနှင့်ပါတော်မူသူလျှို - မြင့်ဆွေ
မြဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၈-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ်တွင် ပါရှိသော ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်၍ စာစီရိုက်ထားပါသည်။ File size (36.5)KB pdf file application. Uploaded by 15.5.2013.
Reading Online Posts